Dhimashada Deg-degga ah ee Suuq-geynta Dibadda | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 30, 2014 Douglas Karr
SBA waxay ku qiyaaseysaa in 600,000 ganacsiyada cusub ee loo shaqeeyaha lagu daro sanad kasta. Qaar badan oo iyaga ka mid ahi kama faa'iideystaan ​​magac caan ah sida IBM ama Coca Cola. Si ay u noolaadaan waa inay ugaarsadaan ganacsi cusub.
Xitaa shirkadaha waaweyn sida EMC, Cisco iyo Hewlett Packard waxay leeyihiin kooxo aad u ballaaran oo u heellan raadinta ganacsi cusub oo ku saleysan saldhiggooda iyo sidoo kale macaamiisha cusub ee mustaqbalka. Iyadoo aan loo marin geeddi-socod lagu raadinayo iyo shuruudaha cabbiraadda ee la xidhiidha, waa wakiil kasta oo iyaga u gaar ah, oo aan waligiis waxtar u lahayn geeddi-socodka ka faa'iideysanaya aqoonta kooxda si looga dhigo dhammaan dadaalka raadinta mid ka sii wanaagsan hawl kasta oo iibin ah.
The marketing inbound warshaduhu lafteedu xumaan weyn ayey sameeyaan marka ay iyagu isu dhigaan bedel aan qaali ahayn oo suuq geynta ah. Khibradayada aan u leenahay macaamiisha waxay muujisay in ka badan iyo in ka badan isku darka labada midba midka kale ayuu xoojiyaa.
Lahaanshaha wax ku ool ah istaraatiijiyada suuq geynta waxay bixin kartaa sumcad hagaajin waxayna dhisi kartaa kalsoonida, muuqaalka iyo awoodda shirkadeed. Waxay ururin kartaa hogaamiyeyaasha mustaqbalka ee raadinta iyo dhexdhexaadinta bulshada oo dhan, waxay ku ururin karaan xogta habdhaqanka iyaga, waxayna u dhiibi kartaa kooxdaada dibedda ah hoggaan ay si fiican u fahmaan waqtiga rajadu ay raadineyso inay wax iibsato.
Lahaanshaha wax ku ool ah istaraatiijiyada suuq-geynta dibedda waxay dadajisaa istiraatiijiyaddaada soo-galista adoo siinaya taabasho shaqsiyeed hoggaanka soo-galista. Wakiilka iibka ee dibedda wuxuu dhisi karaa xiriir rajada, waxna bari karaa, uguna jawaabi karaa si wax ku ool diidmo kasta oo rajadu yeelan karto.
Suuqgeynta dibedda waxay leedahay faa iidooyin badan… si fudud ayaa loo soo saari karaa, daaran karaa ama loo dami karaa, ama loo kordhin karaa loona yareyn karaa si loo jaangooyo baahida. In kasta oo ay u baahan karto maalgashi sare, natiijooyinka waa inay noqdaan kuwo la saadaalin karo, dhakhso leh oo wanaagsan.
Add a suuq geynta suuq geynta sida kafaala qaadayaashayada Xaqiiqda Isdhexgalka, a xalka maaraynta soo-jeedinta sida TinderBox (sidoo kale kafaala-qaadayaasheena), waadna kordhin kartaa waxtarka dadaalladaada banaanka si aad ah… yareynta waqtiga kooxdaada dibedda ay ku bixinayso howlaha maamulka. Kordhinta iibintu waxay xireysaa farqiga udhaxeeya meesha soo gelida iyo dibedda ay ku kulmaan.
Tags: marketing inboundsuuq geyn dibedda ahKordhinta Iibka
Feb 2, 2014 markay ahayd 4:45 PM
Suuqgeynta dibedda waxay ahayd sida aan ganacsigeyga u dhisey markii horaba, waxaanan ka caawiyey xirfadlayaal maaliyadeed badan inay iyaguna dhisaan ganacsiyadooda. Kaliya ma wacayo, laakiin u dirista xirmooyinka ogeysiiska gaarka ah. Way shaqeysaa oo sifiican ayey iigu shaqeysaa aniga iyo kumanaan kale. Run ku filan, waxaa jira shaqo badan oo ku lug leh, laakiin isku darka dibedda ee lagu sameeyo fasalka iyo soo-galista xirfad-yaqaanku waxay si fiican ugu shaqaysaa ganacsiyada badan.
Feb 2, 2014 markay ahayd 5:56 PM
Lagu heshiiyay @stephenwanderson: disqus!
Feb 17, 2014 markay ahayd 6:55 PM
Si kastaba ha noqotee, qosol badan, sida istiraatiijiyaddani u hesho PR badan oo xun, markay waxtar badan yeelan karto
Feb 5, 2014 markay ahayd 6:16 PM
Runtii waa dhibic weyn Doug! Inbound waxay shaqeysaa markaad hor istaagto dadka og inay dhibaato qabaan. Laakiin dadka badankood ma oga inay dhibaato qabaan illaa ay ka arkaan xaalad kale oo ka jirta xaaladda hadda jirta. Taasi waa waxa dibedda kuu sameeyaa. Ganacsigeena, Facebook waa hab la yaab leh oo lagu sameeyo suuq geynta dibadda. FB-ga waxaan si fudud ugu bartilmaameedsan karnaa dadka ama saaxiibada la ah macaamiisheena hadda jira ama dadka nala wadaaga astaamaha macaamiisheenna jira.
Boosto iyo aragti weyn.